गाउँमा पुल नहुँदा भारतकै भर, कहिले बन्ला पुल ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
गाउँमा पुल नहुँदा भारतकै भर, कहिले बन्ला पुल ?
८ भाद्र २०७८, मंगलवार १९:१५
दिनेश बिष्ट, कैलाली । कैलालीको हौसलपुर गाउँ बिकट क्षेत्रमा पर्छ । भारतीय सीमासँग जोडिएको यो गाउँ नेपाली क्षेत्रको सेवा सुविधा लिन हिउँद पर्खनुपर्छ । गाउँ जोड्ने पुल नबन्दा नेपालीले भारतीय बजारको भर पर्नुपर्छ ।
२८ घरधुरीको बसोबास रहेको हौसलपुर गाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएसंगै ग्रामिण गतिविधि बढेको छ । तर यो क्षेत्रलाई जोड्ने पुलको अभावले स्थानीयबासीले सरकारी सेवा सुविधा लिन हिउँद पर्खनु परेको छ । बजारका लागि भारत जानुपर्छ । बालबालिका पनि भारतीय विद्यालयमै अध्ययन गर्र्दै आएका छन् ।
भारतको दुधुवा नेश्नल पार्कसंगै जोडिएको यो गाउँले नेपाली भुमीको रक्षा गरेको छ । बिगत बर्षौँदेखी यहाँ बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुलाई आफु नेपाली भएको भन्ने समेत केही बर्षअघीसम्म थाहा थिएन ।
केही बर्षअघी स्थानिय प्रशासनको निरिक्षण पश्चात उनिहरुले नागरिकता पाएका थिए । नेपाली नागरिकता पाएपनि उनीहरु सरकारी काम बाहेक अन्य कामका लागी भारतमै निर्भर छन् ।
पछिल्लो समय गाउँलाई आफ्नै देशसँग जोड्न ठूलो प्रयास गरिरहेको स्थानिय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । नेपाली भाषा सिकाउने कामदेखी गाउँमा योजना सञ्चालनसम्म स्थानिय तहले गरिरहेको जनाइएको छ । अब छिटै गाउँमै आधारभूत विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।
स्थानीय सरकार गठनपछि हौसलपुरमा क्रमिक रूपमा विकास भइरहेपनि अँझै गाउँको बिकासमा धेरै पहल आवश्यक देखिन्छ । राज्यबाट प्राप्त हुने केही सेवासुविधा यहाँका बासिन्दाले पाउन थालेपनि मोहना नदीमा पुल नबनेसम्म उक्त गाउँ दुर्गम नै रहने छ ।